Cayilka canjirada ayaa ka fiican xulusta caloosha - BBC News Somali
Taallada Stalin oo suran Moscow
Mid ka mid ah wargeysyada Ruushka oo warbixin ka qoray arrintaasi ayaa cinwaan uga dhigay: "Stalin Xiddi Sare".
Waqtiga oo laga soo gudbay: "Dhacdooyinkaasi way fogaayeen," ayay BBC-da u sheegtay.
Buunbuuninta ay dowladda u sameysay: Ms Shulman ayaa tiri "yeynaan iska indho tirin xaqiiqda ah in Stalin loo aqoonsaday guushii dagaalka iyo hoggaamiyihii caqliga badnaa. Iyo in xilligii Soviet-ka loo arko xilligii ugu wanaagsanaa".
Dareenka ah ka hor imaanshaha hoggaanka: "Tani waa qaybta ugu xiisaha badan," ayay tiri Ms Shulman. "Taallada Stalin ma aha isaga oo sax ah, balse waxaan xusuusta ka tirmeyn - waxaa loo arkaa inuu calaamad u yahay edbinta iyo inuu dagaal la galay saraakii dhuuni-raac ah, oo maamul walba la loollamaya."
Stalin (safka ugu horreeya, midig) ayaa Yalta ku martigeliyay saaxiibbadiisa dagaalka ee Churchill iyo Roosevelt horraantii 1945
Madaxweyne Putin ayaa marar badan dadkiisa xusuusiya geesiyaashii dagaalka ee dalkaas
'Geesi' soo cusbooneysiintii Stalin